Manondro Ny Lalao Olaimpika, Fikorontanana Ara-politika ary Trump Ny Safidin’ny ‘Kanji-n’ny Taona’ Ao Japana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 23 Desambra 2016 5:02 GMT
Ny tarehin-tsoratra shinoa kin (金) no notondroina ho kanji manamarika ny tsara indrindra tamin'ny taona 2016 ho an'i Japana. Pikantsary avy amin'ny fantsona ofisialy Youtube ANN News .
Ny tarehin-tsoratra Shinoa kin (金) no notondroina ho Kanji manamarika amin'ny fomba tsara indrindra ny taona 2016 ho an'i Japana. Tarehin-tsoratra Shinoa fantatra amin'ny hoe kanji (漢字) ao Japana, ary midika hoe “volamena” , “harena “, na “vola ” kosa ny tarehin-tsoratra “金” amin'ny teny Japoney .
Nofantenin'ny Fikambanana Japoney Manana Traikefa Kanji (財団法人日本漢字能力検定協会. Zaidan hōjin Nihon Kanji Nōryoku kentei kyōkai) ny Taona Kanji izay mifototra amin'ny vokatry ny fitsapan-kevitra manerana ny firenena. Maherin'ny 150.000 ny olona manerana an'i Japana no nifidy tamin'ny lisitry ny kanji,ary ny “volamena” no nahazo ny laharana voalohany, miaraka amin'ny vatom-pifidianana miisa 6.655.
Tao amin'ny famoaham-baovao, nanazava ny Fiarahamonina Manana Traikefa Kanji Japoney fa fanamarihana Kanji tsara ho an'ny taona 2016 ny “volamena” noho ny fahombiazan'i Japana tamin'ny Lalao Olaimpika Rio 2016 : izay nahazoan'ny Firenena meday volamena miisa 12. Azo vakiana tahaka ny kane, na “vola” ny Kanji “金”, izay nitana ny anjara asany tamin'ny fionganan'ny Governoran'i Tokyo teo aloha Masuzoe Yoichi, ary voatery nametra-pialàna tamin'ny taona 2016 noho ny fandaniana niteraka fanafintohinana.
Nanazava tsy nihambahamba ihany koa ny Fikambanana Manana Traikefan'ny Kanji Japoney fa anisan'ny foto-kevitra volamenan'ny taona 2016 ihany koa ny “volo volamenan’ ” ny Filoha Amerikana voafidy Donald Trump .
Nambara tao amin'ny Tempolin'i Kiyomizu ao Kyoto ny Kanjin'ny taona 2016 tamin'ity taona ity, ary vaovao lehibe ny hetsika.
Inona ny tarehin-tsoratra Shinoa nosafidian’ i Japana mba hanamarihana ny herintaona lasa? Ny litera “volamena” no lany tamin'ity taona ity . (Ao amin'ny tempolin'ny Kiyomizu)
Nandefa soso-kevitry ny kanji-n'ny taona ny mpifidy Japoney. Taorian'ny “volamena”, ny “選” no laharana faharoa teo amin'ny lisitra , izay midika hoe “misafidy”, “mifidy”, na “fifidianana” izay angamba manondro ny fifidianana Amerikana tamin'ny Novambra . Ny “変” no laharana fahatelo , izay midika hoe “hafahafa” na “tsy mahazatra”, toy ny taovolon'i Donald Trump, na ny vokatry ny fifidianana Brexit tsy nampoizina tany amin'ny Fanjakana Britanika tamin'ny volana Jona.
Nahasarika ny saina ihany koa ny endri-tsoratra fahavalo sy ny fahasivy malaza indrindra tamin'ny lisitry ny tarehin-tsoratra kanji 2016. Rehefa natambatra ireo tarehin-tsoratra roa dia nanome “不倫” (furin), voambolana Japoney midika hoe “fanitsakitsaham-bady”.
Raha misy hifandraisany amin'ny Lalao Olaimpika ny kanji-n'ny taona 2016 , “volamena”, ny tarehin-tsoratra fahavalo sy fahasivy kosa, rehefa ampiarahana, dia mamorona “fanitsakitsaham-bady” , ary azo antoka fa miavaka.
Nivazivazy tamin'ny kin ho an'ny taona kanji reo mpisera aterineto Japoney. Ohatra, izany no anaram-pianakavian'ny mpitarika ambony indrindra any Korea Avaratra Kim Jong-un (金正恩) izany.
Nahatonga hafaliana feno ho an'ny mpitarika fara tampony sasantsasany ny zava-misy fa ny kin no kanji-n'ity taona ity.
Nifanatsafa ny Japoney mpisera sasany fa toa sarotra vakiana ny tarehin-tsoratra ofisialy nampiasaina mba hanamarihana ny kin. Nanao fakan-tahaka feno haranita-tsaina tamin'ny fanambarana ny kanji-n'ny taona 2016 ny kaonty fampiroboroboana vokatra ao amin'ny Twitter an'ny tranonkalan'ny andian-tantara malaza Eagle Talon (秘密結社 鷹の爪) :
“Volamena” ny kanji 2016 tamin'ity taona ity , ary tsy mampaninona ahy ny milaza fa tsy mahay mamaky akory ny tarehin-tsoratra aho! Toa tahaka nofafana ilay izy raha vao vita ny fanambarana.
Noho izany, nanapa-kevitra ny hanoratra ny kanji-ko taona 2016 manokana aho tamin'ity taona ity ! Izany dia 鷹 [taka, izay midika hoe “voromahery”] !
Nanoso-kevitra ny mpisera Twitter iray hafa fa “besisika” (鯉, koi) no tokony natao kanji-n'ny taona 2016, rehefa sambany nandrombaka ny fanevan'ny Ligy Afovoany voalohany ny ekipan'i Hiroshima Carp amin'ny taranja Baseball hatramin'ny taona 1981 (Besisika ny anaran'ny ekipa raha adika teny malagasy). Amin'ny sary novana tamin'ny photoshop eto ambany, novain'i Arai Takahiro tia mpanindrotsindrona ao amin'ny Carps ho “besisika” ny Kanji-n'ny taona 2016:
Tsy afa-po tamin'ny safidy kanji-n'ny taona fotsiny i Arai .
Nihevitra ny tranokalam-baovao mpaneso Rising Wasabi fa ny hira malaza mampihetsim-po PPAP no tokony ho lany :
Fa angamba ve avy amin'ny “tranonkalam-baovao hosoka” izy ity ?
“PPAP :Pen-Pineapple-Apple-Pen” ( Penina-Mananasy-Paoma-Penina) no hira nalaza indrindra tamin'ny taona 2016 :